ဖလိုရိုက်ဓာတ်ဟာ သွားပိုးစားရောဂါကာကွယ်ပေးတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ အသုံးပြုလာတာ နှစ် ၆၀ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
၁-သွားတွေဖြစ်ထွန်းကြီးထွားနေချိန် (သွားမပေါက်မီ) သာမက၊ ပေါက်ပြီးသားသွားကိုပါ၊ ပိုမာကျောပြီးအက်စစ်စားဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ (fluoroapatite) ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
၃-သွားပိုးစားရောဂါဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်မှာ အရေးပါတဲ့ဓာတ်ကူပစ္စည်းအင်ဇိုင်းကို ဟန့်တားပေးခြင်း
သွားပိုးစားရောဂါဟာ ကမ္ဘာတလွှားလူအများအပြားမှာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာဖြစ်တာမို့ အရေးကြီးတဲ့ လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာ (public health problem) ဖြစ်နေပြီး၊ ရောဂါမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ primary prevention လုပ်ရာမှာ ဖလိုရိုက်ဓာတ်ကအရေးပါလှပါတယ်။
သဘာဝသောက်သုံးရေထဲမှာဖလိုရိုက်ဓာတ်ပါလေ့ရှိပေမယ့် ကမ္ဘာ့နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီး ပါဝင်တဲ့ပမာဏအနည်းအများကွာပါတယ်။ ရေထဲမှာဖလိုရိုက်ဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတချို့မှာ အများသုံးသောက်သုံးရေထဲ ဖလိုရိုက်ဓာတ်ခတ်ပြီး၊ လူအများအပြားကို ဖလိုရိုက်ဓာတ်ရဲ့အာနိသင်ကိုရစေတဲ့ ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးနေကြပါတယ်။ တချို့လည်း ဖလိုရိုက်ပါတဲ့ရေသန့်ဘူးတွေထုတ်လုပ်တယ်။ ဒီလိုဖလိုရိုက်ဓာတ်ထည့်ထားတဲ့ရေကြောင့်နိုင်ငံပေါင်း၆၀ကျော်က လူသန်းပေါင်းများစွာဟာ၊ သွားပိုးစားရောဂါကာကွယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရနေတယ်လို့ အမေရိကန်သွားဘက်ဆိုင်ရာအသင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဖလိုရိုက်ဓာတ်ပါတဲ့ရေသောက်ခြင်းအားဖြင့် သွားပိုးစားရောဂါကို ၆၀%အထိလျော့နည်းစေပါတယ်။
ဖလိုရိုက်ပါတဲ့နွားနို့၊ အစားအစာ၊ ဖလိုရိုက်ဆေးပြားစားသုံးခြင်း၊ ဖလိုရိုက်ဓာတ်ပါတဲ့သွားတိုက်ဆေး၊ ငုံဆေးများသုံးခြင်းနဲ့ ဆေးခန်းမှာ သွားဆရာဝန်က ဖလိုရိုက်ဓာတ်သွားပေါ်သုတ်လိမ်းပေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖလိုရိုက်ဓာတ်ဟာလည်းဆေးတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလို့ဆိုလိုက်တိုင်း ကောင်းကျိုးအပြင် side effects လို့ခေါ်တဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီးဒွန်တွဲပါနေပါတယ်။
၁-အသက်အန္တရာယ် (၅mg/kg body weight ပမာဏကိုယ်ထဲဝင်သွားရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ )
၃-သွားများ fluorosis ခေါ် သွားမာကျောမှု၊ အရောင်၊ တည်ဆောက်ပုံများပြောင်းလဲစေပြီး၊ သွားများမြန်မြန်ပျက်စီးစေခြင်း
dental fluorosis အပျော့စား (မြန်မာအရပ်ထဲမှာတော့ သွားပွင့်တယ်-ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးသွားပြဿနာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့သူတွေတော်တော်များများမြင်းခြံဘက်မှာကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရေထဲကဖလိုရိုက်ဓာတ်စစ်ထားတဲ့စစ်တမ်းရှိမရှိမသေချာလို့ အတတ်တော့မပြောနိုင်ပါဘူး)
dental fluorosis အလတ်စား (သွားအရောင်ဝါကျင်)
dental fluorosis အဆိုးဆုံး (ကြွေလွှာများအလိုလိုပဲ့ထွက်ကျွေကျပါတယ်)
ဒီလိုအန္တရာယ်တွေကြောင့် ဖလိုရိုက်ဓာတ်ပါတဲ့ရေသန့်ဖြည့်စွက်သောက်မယ်ဆိုရင်တောင်၊ ကိုယ်နေတဲ့အရပ်က သဘာဝရေထဲမှာ ဖလိုရိုက်ဓာတ်ဘယ်လောက်ပါနေလဲ၊ အထူးသောက်ဖို့လိုမလို စိစစ်ရပါတယ်။ သဘာဝဖလိုရိုက်ဓာတ်ပါဝင်မှုများပြီး fluorosisဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုမြေပုံမှာပြထားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကလေးတွေကို ဖလိုရိုက်ဆေးပြားတိုက်ကျွေးတာမှာသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သွားဆရာဝန်နဲ့မတိုင်ပင်ဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ကလေးကိုဆေးမတိုက်ပါနဲ့။ ဆေးပမာဏက ကလေးအသက်ပေါ်မူတည်ပြီး ထိန်းညှိသွားရပါတယ်။
၆လကနေ ၂နှစ်ကြားကလေးတွေကို တနေ့ ၀.၂၅ mgထက်ပိုမတိုက်သင့်ပါဘူး။ ၂နှစ်အထက်ကိုတော့ ၀.၅ မီလီဂရမ်၊ ၅-၆နှစ်ကလေးတွေကို ၁မီလီဂရမ်တိုက်နိုင်တယ်လို့ညွန်ကြားထားပါတယ်။ (ဗဟုသုတအဖြစ်ပါ)
သုတေသနတခုအရ၊ အသက်၆နှစ်မတိုင်မီမှာ ဖလိုရိုက်ဆေးသောက်လာခဲ့ကြတဲ့ကလေးတွေ fluorosis ဖြစ်ဖို့အလားအလာများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်သွားဆရာဝန်များဟာလည်း ကလေးရဲ့သွားနဲ့ခံတွင်းသန့်ရှင်းမှုအခြေအနေ၊ သွားပိုးစားရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများ-နည်း၊ စတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး တကယ်လိုအပ်လွန်းမှသာ ကလေးကိုဖလိုရိုက်ဓာတ်တိုက်စေသင့်ပါတယ်။
ဖလိုရိုက်ဓာတ်ပါတဲ့သွားတိုက်ဆေးတွေသုံးတာနဲ့လည်း သွားပိုးစားရောဂါကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာ အရင်ပို့စ်တွေမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ သတိထားရမှာက အဲလိုထိရောက်မှုရှိအောင် သွားတိုက်ဆေးထဲမှာ ဖလိုရိုက်ဓာတ်အများကြီးထည့်ထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မတော်တဆဖြစ်ဖြစ်၊ တမင်ဖြစ်ဖြစ်မျိုချမိရင် စောစောကပြောတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရဲ့အန္တရာယ်ခံစားရမှာဖြစ်လို့ ကလေးတွေကို ဆေးထည့်ပေးရင် ပဲပြုတ်လုံးသေးသေးပမာဏဘဲထည့်ပေးဖို့ သွားတိုက်ဆေးကိုမမျိုချစေဖို့ သတိပေးဖို့ကို ထပ်ပြီးအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ကိုးကား-Fluoride supplements useful but increase the risk of mild fluorosis
Ismail AT, Bandekar RE. Fluoride supplements and fluorosis:ameta-analysis. Community Dent Oral Epidemiol 1999;
Posted by Dr. Nyan at 3:54 PM
Thanks A Lot Dr. :-)
ဟုတ်ပါတယ်။ မြင်းခြံဘက်က ရေဟာ တမျိုးပဲ။ အရသာက တခြားနေရာက လာတဲ့သူတွေ အဖို့ အတော်သိသာတယ်။ သူ့အနီးပတ်ဝန်းကျင် နယ်တွေနဲ့ကို မတူဘူး။
ဆရာပြောသည့်အတိုင်းပါပဲ ကျွန်တော်လည်းမြင်းခြံမှာကြီးလာသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး ဆရာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံထဲကလိုကျွန်တော်သွားကဖြစ်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးနဂိုသွားမူလပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်၍ရသောနည်းလမ်းလေးများရှိရင်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။